Sunday December 05, 2021 - 12:48:45
Wararka ka imaanaya deegaanka Baar-Sanguuni ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka Jubaland iyo kuwa Al-Shabaab uu barqanimadii maanta ka dhacay halkaas, islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
ilo wareedyo ayaa noo xaqiijiyay in dagaalkaas lagu dhaawacay hal askari oo magaciisa lagu soo koobay Nuur oo katirsanaa ciidamada maamulka Axmed Madoobe kana ka mid ahaa ciidamada ku qoran saldhigga Baar Sanguuni.
Dhanka kale wararka ka imaanaya deegaanka Awdiinle ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax xoogan lala beegsaday ciidamo katirsan kuwa Koonfurgalbeed.
Qaraxan ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay laba askari tiro kalena lagu dhaawacay sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo la hadlay idaacada Andalus.
Dhad dhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ayaa xoojiyey weerarada uu ka fulinayo deegaanada ku dhow dhow caasimadaha maamul goboleedyada halkaas oo ay ka socdaan doorashooyinka baarlamaaniga.